« Lasan-kovavany fotsiny » -
AccueilTresaka« Lasan-kovavany fotsiny »
« Lasan-kovavany fotsiny »
27/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Mahagaga sy mahatalanjona mihitsy ity afitsoky ny CENI amin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana filoham-pirenena ity. Efa iaraha-mahita izao ireo hosoka sy hala-bato mibaribary eny anivon’ireo distrika maro, ny hamoaka ny vokatra vonjimaika anefa no mahamaika ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amin’ity andro ity. Tsy azo lavina anefa fa mila fanamarinana sy fitsirihina akainy ireo (PV) isaky ny birao fandatsaham-bato raha tiana ny hivoahan’ny fahamarinana sy ny mangarahara amin’izao fifidianana izao. Izany hoe mila fotoana ny fanatanterahana izany.
Ekena fa tsy anjara asan’ny CENI, ary mifanohitra amin’ny lalàna mifehy ity andrim-panjakana ity ny mikitika, na manafoana ny vokatra avy amin’ireny birao fandatsaham-bato alefan’ny SRMV ireny, ilaina kosa anefa ny fanamarihina avy amin’izy ireo ny fisina tranga tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy. Iny fanamarinana iny no raisin’ny eny amin’ny HCC avy eo ahafahan’ity farany mamoaka ny didy amin’ny fanafoanana na tsia ny vokatra avy amina birao fandatsaham-bato iray na maro.
Toa tsy te ahafantatra izany anefa ny CENI fa raha vao nanomboka nitranga, ary tratran’ny K25 ireo hosoka sy hala-bato tany amin’ny faritra maro, dia narosony ny daty amoahana ny vokatra vonjimaika. Raha tsiahivina, dia efa nisy fanambarana niezinezina nataon’i Thiery Rakotonarivo filoha lefitry ny CENI ny amin’ny hoe amin’ny faha 31 Decembre no fotoana ahafahan’ity andrim-panjakana ity mamoaka ny vokatra vonjimaika amin’ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ity, na dia nambarana aza hoe fara faha tarany.
Izany azo atao ihany ny mitana io daty efa nomena io, saingy noho ny fahatrarana ireo hosoka marobe, dia natao amboletra ny famoahana izany. Iaraha mahafantatra fa mila fotoana ny fampitahana ireo PV isaky ny birao fandatsaham-bato. Notsinotsiniavin’ny CENI anefa izany noho ny antony tsy mazava.
Sarotra aloha ny hiteny hoe tsy mahay ny asany ireto mpikambana ao amin’ny CENI ireto manoloana izao trangan-javatra hafahafa izao. Ny azo antoka kosa dia tsy te ahafantatra afats’izay vola miditra amin’ny fotsiny izy ireo. Raha tena tao tokoa mantsy ilay fahatsiarovan-tena anatanteraka ny asa nankinina taminy, tsy toy izao no niafaran’ity fifidianana ity. Lasan-kovavany toa ari-tabebaka fotsiny ireo mpikambana foibe rehefa miresaka amin’ny haino aman-jery, fa rehefa tena atao ny fampiharana kay lasa savoritaka sy tsy fahatomombanana no betsaka.